श्रीमतीले छोडेर गए अर्काे युवती गिफ्ट दिने व्युरो ! « Lokpath
काठमाडौं । कोहि पनि मानिस आफ्नी श्रीमतीले छोडेर नजाओस् भन्ने चाहन्छ । यदि आफूलाई छोडेर श्रीमती पर-पुरुषसँग जान्छिन् भने कल्पना गर्नुहोस् त त्यो समय कति पीडादायी होला ? साथै आफ्नो इज्जतमा पनि दाग लाग्छ ।
तर चीनको एक म्यारिज व्युरोले आफ्नो विज्ञापनमा श्रीमतीले छोडेर गए अर्काे युवती गिफ्ट दिने कुरा खुलाएको छ । एक वेव पोर्टलका अनुसार एउटा चिनियाँ म्यारिज व्युरोले आफ्नो ब्यापारका लागि यो अचम्मको अफर विज्ञापनमा खुलाएको हो ।
यदि कोहि चिनियाँ पुरुषले भियतनामकी महिलासँग विवाह गर्दछन् र महिलाले पुरुषलाई छोड्छन् भने भियतनामकै अर्की कुमारी केटीसँग फ्रिमा विवाह गरिदिने व्युरोले बताएको छ ।
म्याचमेकिङ एजेन्सीले दिएको विज्ञापनका अनुसार भियतनामकी कुमारीसँग तीन महिनाभित्रमा विवाह गरिदिने बताएको छ ।
त्यसका लागि ३२ हजार डलर विज्ञापन संस्थालाई दिनुपर्छ । यदि ति कुमारी पनि १ वर्ष भित्र भागिन भने फेरी व्युरोले अर्काे विवाह गरिदिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २०७६,माघ,२०,सोमवार २१:००